Monday, March 28, 2011 Wednesday, October 29, 2014 Douglas Karr
Izu a, m zara Facebook kwuru (ọ dị mma… ọ bụ esemokwu) na-ede akwụkwọ ozugbo zara… “Ya mere, anyị kwetara!”. O mere ka m laghachi ma gụgharịa okwu ya. Enwere m ihere ịhụ etu okwu m si dị egwu na nzaghachi nye ya - Agbaghara m isi isi ya kpamkpam. Ka oge na-aga, achọtara m okwu na blọọgụ m nke kpasuru m iwe… mana n'ezie adịchaghị iche n'echiche m na edere m. Ọ
Wednesday, April 23, 2008 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 23, 2009 Douglas Karr
Nke a bụ ahụhụ mara mma (na mkpari) m gbabara taa. Achọrọ m imegharị ihe onyonyo n'iji nlele site na 140px ruo 100px n'obosara. Preview agaghị echekwa ya mgbe m pịrị OK. Echere m na achọpụtara m - lee nha nsonaazụ nsonaazụ.